Showing २११-२२० of ९५३ items.
किन बढिरहेछ सडक दुर्घटना ?
हामी दैनिक सडक दुर्घटनाका खबरहरू सुन्छौं । तथ्याङ्कहरूले नेपालमा सडक दुर्घटना बढिरहेको देखाउँछ । तर, दुर्घटना किन बढिरहेका छन् त ? भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । झट्ट हेर्दा दुर्घटनाका विविध कारणहरू देखिए पनि मुख्य कारण भनेको ट्राफिक नियमको पालना नगरिनु हो । ट्राफिक नियममा रहेर सवारी साधन चलाए दुर्घटना अवश्य कम हुन्छ । त्यसका लागि आम सर्वसाधारणमा सचेतना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ । सवारीसाधनलाई चलाउँदा केही कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । जस्तो, आफ्नो सवारीसाधनमा पुग्नभन्दा पहिला कुनै क्षति पुगेको पो छ की भनि १० मिटर दुरीबाट हेर्नुपर्छ । त्यस्तै अतिरिक्त चक्का र ज्याक गाडीलाई एक
प्रदेश १ को सांस्कृतिक ब्रान्डः ‘सिलाम साक्मा’
सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा लिम्बू र राई समुदायले प्रेमपूर्वक छातीमा लाउने मौलिक ब्याचलाई सिलाम साक्मा भनिन्छ । सिलाम साक्मा प्रयोगको कोणमा हेर्दा लिम्बू र राईको सांस्कृतिक बिम्ब हो । यसको बहुआयामिक महŒवको कोणमा भने सिलाम साक्मा नेपालको अत्यन्तै अमूल्य सांस्कृतिक निधि हो । नेपाल भित्र पनि प्रदेश १ को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक ब्रान्ड हो सिलाम साक्मा । दुनियाँमा धेरै संस्था, दलदेखि कार्यक्रमहरूका आफ्ना आफ्ना ब्याच हुन्छन् । सामान्यतया ती ब्याचको अर्थ औपचारिकताको लागि हुन्छ । सिलाम साक्मा ब्याचको अर्थ भने एउटा औसत ब्याचको भन्दा माथि छ । प्रयोगका विविधताका आधारमा सिलाम साक्माल
२,८९६ पटक पढिएको
विश्व शान्ति र अमेरिका
विश्व आज युद्धमा मडारिरहेको छ । शक्तिको होडबाजीले संसार आक्रान्त छ । केही महिनाअघि अमेरिका र उत्तरकोरियाको शीत युद्धले विश्वलाई तरङ्गित तुल्यायो । तर, यो भिडन्तमा उत्तर कोरियाको जित भयो । आफूलाई विश्वको एक्लो बादशाह मान्ने अमेरिकालाई सबै क्षेत्रमा कोरियाले हराइदियो । अमेरिकाको आणविक धम्कीलाई कोरियाले पनि आणविक हतियारको धम्कीले नै जवाफ दियो । अमेरिकाले अफगानिस्तान र सिरियामाथि आक्रमण गरेजस्तो उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्न सकेन । उत्तर कोरियालाई विनाशकारी युद्धको मनस्थितिमा बाँचिरहेको तानाशाहको देश भन्छन् पश्चिमाहरू । उत्तर कोरियाले त्यसलाई प्नि झुटो प्रमाणित गरिदियो । आजै मिसाइल हानिने हो कि भन्
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा
प्रारम्भ नेपालको सङ्घीयवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै पहिचानको मुद्दा बोकेर आन्दोलित भइरहने भूगोल हो तराई र सुदूरपूर्वी क्षेत्र । दक्षिणी समथल भूगोलमा मधेश र थरुहट आन्दोलन हाबी छ । सुदूरपूर्वी भूगोल भने लामो कालखण्डदेखि लिम्बुवान आन्दोलनले रङ्मगाएको छ । लिम्बुवान प्रदेशको मागलाई उठाएर आन्दोलन गर्ने सबैभन्दा पछिल्लो शक्ति हो – लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन । आन्दोलनको उठान नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा प्रवेश र्गयो । खासगरी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित (शिल्पी), पिछडिएको क्षेत्र, भूगोल र वर्गहरूले आफ्ना मागहरू संवैधानिक रूपमा बहिष्करण परेको महसुस गरे
अमित थेवे मिहाङ
अन्यौल ग्रस्त लिम्बू समुदाय
नेपालको पूर्वी क्षेत्र हालको प्रदेश नं. १ मा बसोवास गर्ने मुख्य जातिहरूमध्ये लिम्बू समुदाय एक हो । जनगणना २०६८ अन्ुसार नेपालमा लिम्बूहरूको कुल जनसङ्ख्या ३,८७,३०० रहेको छ । विश्व भरि छरिएर रहेका लिम्बूहरूको कुृल जनसङ्ख्या लगभग सात लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । नेपाल रहेका लिम्बूहरूमध्ये जनगणना २०६८ अनुसार ३,४३,६०३ आफ्नो मातृ भाषाका रूपमा लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूपमा यस समुदायलाई लिम्बू जाति भनेर चिनिए तापनि यस जातिले आफूलाई याक्थुङ जाति भनेर चिनाउने गर्दछन् । लिम्बू भन्ने शब्द राजनैतिक हिसाबले आफूले र राज्यले यो जातिलाई पहिचान गरे पनि यो जातिले आफूला
थरी थरीका होलीको इतिहास
फागु पूर्णिमा रङहरुको पर्वका रुपमा मनाइने होली पर्व पनि हो । बसन्त ऋतुको आगमनसँगै रङ खेलेर उल्लासपूर्ण रुपमा देशभर होली पर्व मनाउने गरिन्छ । असत्यमाथि सत्यको जीतको रुपमा होली पर्व मनाउँदै आइएको पाइन्छ । आपसमा रङहरू दलेर खुशीयाली साटासाट गरेर मनाइने पर्वमा जसरी विभिन्न रङहरूको महत्व रहन्छ, त्यसरी नै समाजमा सबै जाति–भाषा, लिङ्ग, वर्ण तथा समुदायको सम्मिश्रण सुहाउँछ भन्ने मर्म यस पर्वले बोकेको छ । भातृत्व र आपसी सद्भावको पर्व–हालीको रौनक विभिन्न क्षेत्रमा सुरु भइसकेको छ । विभिन्न स्थानमा संस्कार अनुसार होलीको उत्सव सुरु भएको छ । यस पर्वलाई मेलमिलाप, आपसी भाइचारा र सद्भावको सन्देश प्रवा
१,०१७ पटक पढिएको
के कोरोनाभाइरस गर्मी मौसममा हराउला ?
छिमेकी मुलुक चीनको वुहानबाट संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस ( कोभिड १९) ले विश्वभर त्रासदीपूर्ण वातावरण छाएको छ भने यसका कारण कैयौं अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान, सयौंको सङ्ख्यामा सभा, सेमिनार, सम्मेलन , पर्यटन प्रवर्दन, स्कुल कलेज लगायत व्यापारिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावित तुल्याएको छ । यसको निराकरणका लागि यो भाइरसबाट प्रभावित मुलुकहरूको सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५८ खर्व रुपैया“ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने विश्व बैङ्क समूहबाट १२ विलियन डलर अर्थात् १३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । वुहानको यो भाइरस ७० राष्ट्रमा फैलिसकेको छ
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिबस(८ मार्च) सँसार भरका महिलाको महत्वपूर्ण दिनको रुपमा मानिन्छ । सन १९१० मा कोपनहेगनमा समाजवादी महिलाको दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो । यही सम्मेलनमा महिलामुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेटकिनले मार्च ८ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । सम्मेलनले उहाँको प्रस्तावलाई एकमतले पारित गरयो । आठ मार्चलाई विश्वभर महिलामुक्ति र समानताको आन्दोलनको रूपमा मनाउन थालियो । ८ मार्चलाई विश्वभरका श्रमिक महिलाले मुक्ति आन्दोलनका रुपमा मनाउन थालेको ६५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५ मा मार्च ८ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउ